ကားငှားရမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အကြံပြုချက်များ၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
El ကားငှားရမ်းခြင်း အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာကိုမဆိုသွားရောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအကြံဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးကြတယ်။ သို့သော်အချို့ရှိပါသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောကိစ္စများ.
ကားငှားရမ်းတဲ့အခါ၊ ၎င်းသည်အပျော်အပါးအတွက်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ခရီးစဉ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုခွဲခြားပါ။ အလုပ်အတွက်အခါပုံမှန်အတိုင်းရွေးချယ်ထားသည့်ကားများသည် Premium အမျိုးအစားဖြစ်သည်၊ အရေးကြီးသောကုမ္ပဏီများသည်စောင့်ဆိုင်းစာရင်းမရှိသောလက်တွေ့ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ဖြစ်သည် ဇိမ်ခံကားငှားရမ်းခြင်း.
ရသောအခါ ပုံမှန်အားဖြင့်ဘတ်ဂျက်များတင်းကျပ်သည်။ ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွား their ည့်သည်များသည်သူတို့၏ငွေများကိုကားထဲတွင်မဟုတ်ဘဲ ဦး တည်ရာနေရာ၊ ဟိုတယ်များ၊ လည်ပတ်မည့်နေရာများစသဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဤကိစ္စများတွင်တန်ဖိုးနည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကကမ်းလှမ်းသောဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုများကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ များသောအားဖြင့်ကားငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ၏ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်းတွင်အံ့အားသင့်စရာများရှိသည်။။ ယာဉ်တာဝန်ကျရန်အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပြီးနောက်ကန်ထရိုက်တာသည်ဖြည့်စွက်မှုများ၊ အခကြေးငွေများ၊ အခကြေးငွေများ၊
အားလပ်ရက်၏ယူဆချက်အပြင်, အချို့အာမခံကုမ္ပဏီတွေကအစားထိုးကားတွေပေးတယ်၊ အရာသူတို့ရဲ့မူဝါဒများတွင်ပါဝင်သည်။
ပညာရှင်များအကြား, ဗင်ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများငှားရမ်းခြင်းဘုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းစနစ်များသည်မော်တော်ယာဉ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်ယူရန်မလိုဘဲသီးခြားအလုပ်များ၊ အလွန်အကျွံအလုပ်များသို့မဟုတ်အထွတ်အထိပ်အလုပ်များစသည်တို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဤအမှုများအတွက်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများ၏ရုံးများသည်များသောအားဖြင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်စက်မှုဇုန်များတွင်တည်ရှိသည်။
ကားတစ်စီးကိုငှားရမ်းရန်ကာလနှင့်ကြာချိန်များသည်အများအားဖြင့်ဖြစ်သည် တစ်ရက်အကြား၊ ငါးရက်မှတစ်ပတ်၊ တစ်လသို့မဟုတ်တစ်လထက် ပို၍ ပင်။
ကဆုံးဖြတ်လျှင် အလွန်တိုတောင်းသောကာလအဘို့, အနည်းဆုံး fixed ကုန်ကျစရိတ်၏အားနည်းချက်ရှိသေး၏ ရင်ဆိုင်ရခံရဖို့။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပြုခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်အတွက်ငှားရမ်းခရက်အရေအတွက်တိုလေ၊ တစ်နေ့လျှင်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားခြင်း (ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း၊ ပုံသေကုန်ကျမှုများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း) ။
ရှည်လျားသောကာလပိုမိုအကျိုးရှိပါသလား မလိုအပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများအတွက် protocol ကိုလိုက်နာပါ တူညီသောယာဉ်မောင်း၊ ကန်ထရိုက်တာကိုတစ်လကျော်ယာဉ်မောင်းနိုင်ခြင်းမှတားဆီးပါ။ အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုမှာထိုကားထဲတွင်စုဆောင်းထားသောမိုင်အကွာအဝေးသည်၎င်း၏ရောင်းဈေးကိုနောက်ပိုင်းတွင်လျှော့ချပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကားငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏လေယာဉ်ကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုစီမှစုဆောင်းထားသောမိုင်အကွာအဝေးအလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိစေရန်သူတို့ကြိုးစားသည် ကားရဲ့တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးမထားဘူး.
ရှိပါတယ် လှုပ်ရှားမှုစုစုပေါင်းလွတ်လပ်ခွင့်, မြို့သို့မဟုတ်ခရီး၏ ဦး တည်ရာအရပျ၌။ အချိန်တိုအတွင်းသင်လိုချင်သောနေရာကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
လမ်းများမသိသောဖြစ်သော်လည်း ယာဉ် GPS မြို့သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းသွားလာရန်လုံခြုံသောလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ မော်တော်ယာဉ်။ ကားငှားတဲ့ကုမ္ပဏီကဂရုစိုက်တယ်။
ငှားရမ်းအေဂျင်စီများအားလုံးနိုင်ငံများရှိနေကြသည်။ တစ် ဦး ကမော်တော်ယာဉ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ် အငှားယာဉ်မောင်းရန်တစ်မိုင်အကွာအဝေးကန့်သတ်။ ဤကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွန်သွားပါကယခင်ငှားရမ်းအေဂျင်စီမှသတ်မှတ်ထားသောဒဏ်ငွေကိုပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ငှားရမ်းထားသောကားသည်နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်မှမထွက်နိုင်ပါ ကုမ္ပဏီထံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲငှားရမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့လောင်စာဆီစျေးနှုန်းအလွန်ကြီးနိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
၏အမှု၌ ပျက်စီးမှုပေါ်ပေါက်ပါတယ်ယာဉ်ပေါ်တွင်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီကမည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုအားပေးသည် ပြုပြင်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်.
များစွာသောအမှုများရှိပါသည် ကားအငှားအတွက်စောင့်ဆိုင်းစာရင်း။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့ရက်များတွင်လိုအပ်မည်ဆိုပါကကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - COMOCOCHE.com / မက်ဒရစ် / Furgobeta ရှိကားမောင်းသူအားငှားရမ်းခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စက် » ကားငှားရမ်းခြင်း
အားကစားခန်းမကိုပြန်လာဖို့အသက် ၉၀ ကျော်လေးဂိုးသမား